The nnapụta nke ụmụ nwoke na Tham Luang Cave | Apg29
The nnapụta nke ụmụ nwoke na Tham Luang Cave
The ụmụ nwoke na Tham Luang Cave.
Ọ bụghị n'ihi ihe ọ bụla, m na-eche nke oké Bible amaokwu Psalm 40: 3, nke bụ ihe Jizọs na-azọpụta site na jọgburu olulu mgbe m ruru akụkọ nke Ọrụ nnapụta nke iri na abụọ, ụmụ okoro na ha football nchịkwa na Tham Luang Cave na Thailand.
"Ọ buru m si slimy olulu, nke apịtị ụrọ. O setịpụrụ ụkwụ m n'elu oké nkume, ma guzosie ike nzọụkwụ m. "Psalm 40: 3
Rescue ime ihe na Tham Luang Cave bụ Ọrụ nnapụta nke na-agbali iji napụta 12 Thai ụmụntakịrị nwoke dị afọ 11-16 afọ na ha football nchịkwa, 25-afọ nwoke.
Ha na-na Tham Luang Nang Non, nke bụ ọgba na Thai n'ógbè Chiang Rai . All na ụmụ nwoke na-na otu bọl dị ka 25-afọ nwoke nchịkwa.
Ha na-tọrọ atọ na ọgba June 23, 2018 mgbe na-aga n'ime ya mgbe mmiri udu mmiri malitere. The ọgba we juputa na miri, na otu na-aga ime ebe na ime ebe n'ime ọgba zere mmiri na-eri.
On July 8, 2018 malitere Ọrụ nnapụta ga-esi na ụmụ nwoke na nchịkwa nke abaitiat. N'ihi ya, anya, na asatọ nke ụmụ nwoke na-e napụtara na onye dị elu mmiri na ime.
Ha bụ ugbu a n'ụlọ ọgwụ. N'oge ehihie, ọ na-eme atụmatụ na-azọpụta ndị ọzọ nke nwoke anọ na ụmụ ha na-azụ.
Echere m na ọ bụ nnọọ nnukwu site-azọpụta ndị na elu ịrụsi ọrụ ike iji nweta ụmụ okorobịa nile na ndị ndú ha. M ga-esi nnọọ nchegbu. Nke a na-arụtụ aka na uru nke mmadụ. Nke ọ bụla onye na bụ uru na-azọpụta ole ọ na-efu.
Na a bara uru Jesus n'ezie gosiri na ọ nwụrụ maka mmadụ nile na obe nke Calvary mgbe ọ zụtara ha na ya dị oké ọnụ ahịa na ọbara.
M na-aga ozugbo na Bible mgbe ha dọpụtaara nwata mgbe nwa okoro nke miri emi na mmiri-jupụta abaitiat. "Ọ buru m si slimy olulu, nke apịtị ụrọ."
Ọ bụ nke a nke bụ nzọpụta. Jizọs chọrọ amịrị nke slimy olulu, na mgbe ahụ na ọ chọrọ ka gị na "ụkwụ n'elu oké nkume," na-eme gị "ọpupu".
Ọ bụ nke a nke bụ nzọpụta na na nzoputa bu na Jizọs Kraịst. Mgbe ahụ, ọ na-anabata Jesus, ị ga-imi nzọpụta na ya eziokwu.
Isiokwu a na-emelite ...